jeudi, 02 juin 2016 09:55
Befandriana Atsimo : Mijaly ireo mpianatra
Toeram-pianarana tsy misy tafo no ivantanan'ireo ankizy mandrato fianarana. Ny kilasy sasany tsy misy dabilio hany ka amin'ny tany izy ireo no manoratra fa ho an'izay misy kosa dia misiska ireo ankizy samy te ahazo toerana.Ny biraon'ny tale ary moa any an-tokotany no misy azy.
mercredi, 01 juin 2016 23:16
Sambava : Niavaka ny fankazalana ny andro tsy ifohana sigara
Nankalaza tamin’ny fomba niavaka ny Andro iraisam-pirenena tsy ifohana sigara isaky ny 31 mey, ny tao Sambava, izay natomboka tamin’ny filaharam-be namakivaky tanàna. Raha tsiahivina moa dia ny 31 mey 1988 no nandray fanapahan-kevitra ny OMS na fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana, fa hanokana andro iray izay mba hilazana amin’ny olona fa loza ny fifohana sigara. Ny tanora Adventista moa no nanao fihetsiketsehana ary nanao fanentanana narahina fizarana taratasy milaza fa mitovy amin'ny mamono tena izay mifikitra amin’ity sigara ity.
mercredi, 01 juin 2016 06:48
Filoha : Ianareo mpanao politika no tokony hiala
Namaly ireo mitaky ny fametraham-pialany ny filoha Rajaonarimampianina ka nilaza hoe, "Ianareo mpanao politika no tokony hiala, izaho anga azonareo terena. Malalaka ny fitenenana fa mifarana hatreo amin'ny fahalalahan'ny hafa ny fahalalahanareo"
mercredi, 01 juin 2016 06:30
May ny imprimerie nationale
Nirehitra io alina io ny imprimerie nationale eo Analakely.
mardi, 31 mai 2016 09:07
Farafangana : Mitaky ny volany ireo mpikambana ao amin'ny TIAVO
Mitaky ny hamerenana ny volan'izy ireo, izay notahirizina ao amin'ny TIAVO ireo mpikambana ao amin'ity ivo fampindramam-bola madinika ao Farafangana ity, vola izay nihitsoka tao an-taonany maro.
samedi, 28 mai 2016 10:38
Sambava: Alatra compteur
Manjaka ny alatra compteur Jirama eto Sambava,nanambara ny avy amin'ny Commissariat de Police fa tafakatra any amin'ny 21 ny fitarainana avy amin'ny mpanjifa fa very ny Compteur Jirama. Miteraka resabe ihany eto Sambava ity toe-javatra ity satria tamin'ny voalohany dia efa tsy nazava tamin'ny mpanjifa ny antony namoahana ireny compteur ireny mba ho atao aty ivelan'ny trano, izao izy misy mangalatra. Dia angalana vola 10.000 Ariary indray ny mpanjifa raha te ampiditra azy indray ho ao an-trano. Mandeha aiza ireo compteur very ireo fa ny zavatra tsy azo afenina dia misy mpiasan'ny Jirama manao asa mitety ireny trano izay mbola tsy manana compteur ka te hampiditra jiro, ka raha omena 400 000 ariary na 2 millions Fmg izy dia mahita compteur fa ny dijoncteur kosa no asain'izy ireo vidina any ivelany. Mitaky ny hanabohana ny marina ny Mpanjifan'ny Jirama aty SAMBAVA.
jeudi, 26 mai 2016 12:02
Ny alarobia 25 mey teo no notanterahina teny amin'ny CEFOM Maibahoaka Talamaty ny fizarana marim-pankasitrahana ho an'ireo izay nandray anjara tamin'ny fiofanana teo anivon'ny ministeran'ny serasera. Nofaranana tamin'io ihany koa ny fiofanana ho an'ireo tale isan-ambaratongany.
mercredi, 25 mai 2016 12:52
Tezitra ireo nisava ny tranon'i Lylison
Tonga nisava ny tranon'i Loholona Lylison ireo manampahefana, satria dia ahian'izy ireo izy no tompon'ny fanakorontanana sy ahiana anongam-panjakana. Akory anefa ny hatezeran'ireo tonga nisava, fa tsy nahita na inona na inona, nosavaina avokoa hatrany ambany fandriana, ny finday, ary rehefa novohaina ny frigidaire, na vata fampangatsiahina, dia tsy nisy sakafo na ny kely aza tao, fa dia ba kiraro tokana no hita tao anaty frigo. Tezitra mafy ity mpisava nahita fa dia nahatsapa toy ny nataon'i Loholona Lylison fanahiniana, merignolo hoy ry zareo Sofia. Tsy nisy azo nitazonana azy moa dia nody ankatezerana ireto mpisava.
lundi, 23 mai 2016 23:20
Feno miaramila sy polisy ary Emmoreg ny tanàna
Feno Emmoreg miaraka amin'ny 4x4, polisy sy miaramila feno camion eny Analakely sy ny manodidina rehetra amin'izao alina izao.
Nalain'ny Chambre de commerce ny taniny eny Ankorodrano
Tona teny anio maraina ny vaditany nalefan'ny Chambre de commerce haka ny taniny izay nobodoan'ny Magro. Niaraka tamin'ny hery famoretana Emmoreg moa izy ireo naka izany toerana izany. Rehefa nanontaniana moa ny antonymaha tonga azy ireo eo dia nilaza fa hiaro ny mety hisian'ny korontana izy ireo. Rehefa nanontaniana indray ireo olona izay teny an-toerana dia nilaza miandry ny fampiraharahana eo amin'ny Chambre de commerce sy ny filoha teo aloha Ravalomanana. Mbola mitohy eny amin'ny MAGRO Behoririka anefa ny fanaterana ny CV io hariva io.